April | 2013 | Somaliland Hargeisa City
Daawo barnaamijka xiisaha leh waa garoonka kubada kolayga ee Tima Cade Hereri iyo Hargeysa
30 April, 2013 — somaliland1991
Waryaha weyn ee Cabdisalaan Hereri oo ah wariye weyn oo caana, aadna looga jecel yahay geyiga ay soomaalidu degto, ayaa marba marka ka danbaysa soo deynaya barnaamij aad iyo aad u xiiso leh. Barnaamijka waxa uu i xasuusiyey maadaama aan degennaa xaafadda Gacan Libaax ee magaalad Hargeysa. Waxaa jirtay in Basket ka, lagu ciyaari jiray wakhtiyadii 80 sannadkii, waxda gacan LIbaax ee ka soo horjeeda dawladda hoose ee Hargeysa. Waaxdaa wxaa immika laga dhigay geerash ay dawladda Hoose ee Hargeysa leedahay. Anagoo yar yar ayaanu ku ciyaari jirnay marka aanay ciyaaray lodka naga waa weynaa.
Waxaa aan berigaa ka xasuustaa oo kubada kolayga ee waaxdaas Gacan Libaax, u ciyaari jiray, oo aan aad u sii xasuusanahay waa maareeyaha Tv: Ga Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Khadar Xasan Cali Gaas, oo marna kubadda cagta ku ag ciyaari jiray isaga iy lodkii anga waaweynaa , wadada carwadda ee dhinaca galbeed. Waxaa runtii igu cusub caawa in uu Cabdisalaan Hereri, isan berigaas kubadda kolayga ku ciyaari jiray waaxda gacan- Libaax. Waxa aan xasuustaa maalin maalmha ka mida 1982 qiyaastii, anaga oo daawanaya ciyaar ka socodtay waaxda Gacan-libaax oo aad u siiso badnayd, oo ay wada ciyaarayeen Gacan- Libaax iyo qolo kale, ayaa anaga oo ciyaartii daawanaya, oo taarabuunka fadhina, maqalnay sawaxan dibada ka yeedhaya, mar kaliya, ayaa dadkii daawanayey ciyaartii xiisaha lahayd iyo labadii kooxood ee wada ciyaaraysay dibedda garoonka waaxda Gacan Libaax dibedda markaliya loo soowada baxay.
Markii aanu dibedii u soo wada baxnay ayaa waxa ay indhahaygu qabteen dhallinyaro tiro badan oo carwadaa dhinaceeda waqooyi oo bannaanbax socoda samaynaya, mudaharaad. In yar ka dib waxa ay soo mareen wadadii carwada ka qabanaysay dhinaca galbeed, waa dhawr boqol oo dhallinyaro u badan. Dadkii ka soo baxay garoonkii kubada kolayga iyo ciyaaryahaniintiiba waxa ay ku biireen mudaharaadkii. Tiradii way sii badatay. Waxaana lagu mudaharaadayey dawladdii macangagta ahayd ee Siyaad Barre hogaaminayey. Xusuusnoow akhristoow dhawr cisho ka hor ayey dawladdaa Siyaad Barre rasaas ku dishay arday faro badanoo u badnaa ardeydii dugsiyadda sare dhiganaysay. Waana maalmihii UFO, soo abuurmaysay, SNM. la aasaasay.
Waxaa habbon in dhacdooyinka taariikhiga ah ee dalkenna ka dhacay wax badan laga qoro. Dhacdadan aan ka sheekaynayo. waxa imminka ka soo wareegtay muddo 31 sanno.
Daawo sawirrada madaxweyne Siilaanyo iyo weftigii uu hogaaminayey oo dalka Ingiriiska ku soo noqday
29 April, 2013 — somaliland1991
Halkan ka dhegeyso waraysigii VOA Somali la yeelatay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo
Raysal-wasaarihii hore ee dalka Kenya, Roila Odinga oo London kula kulmay madaxweynaha Somaliland, Siilaanyo.
Halkan ka dhegyso waraysigaasi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Halkan ka akhriso waraaq uu wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Dr Maxamed Cabdilahi Cumar u qoray UN
28 April, 2013 — somaliland1991
Halkan hoose taabo oo ka akhriso!!!!!!!!!!!!
Boobe Yuusuf Ducale iyo Qormadiisii 2aad Aragtidii Hoggaamiye Cigaal ee Qalalaasaha Soomaaliya iyo mowduucyo kale oo xiiso leh
weli timahaagu waa madow e?.? Inta uu ilko-caddeeyay oo madaxa ii salaaxay ayuu igu yidhi: ?Jihaadka ayaa idin caddeeyay.?‘
Inta uu ilko-caddeeyay oo madaxa ii salaaxay ayuu igu yidhi: ?Jihaadka ayaa idin caddeeyay.? Waxa ay ahayd markii iigu horreysay ee aan noloshayda gacan-qaado lana sheekaysto.
1968 Press Photo Afro-American Institute, President Waldemar Nielsen and Ibrahim Egal
Intii danbe Boorame ayaan kula kulmi jiray oo muddo bilo ah uu ka socday Shirweynihii 1aad ee Guurtidu oo Cigaal loogu doortay Madaxweyne, Meey 1993kii. In badan ayaanu halkaa ku kulannay oo ku sheekaysannay, bal se aan u gudbo dhacdada aan
u socday oo ah mar aanu Addis Ababa wada tagnay bishii Maarj 1993kii.
Maarj 1993kii waxa magaalada Addis-Ababa lagu qabtay wareeggii 2aad ee shirar ku suntanaa Dibuheshiisiinta Soomaaliyeed oo ay soo qabanqaabiyeen Qarammada Midoobay oo beryahaa Xoghaye Guud uu ka ahaa Butrus Qaali oo ku dhex ambaday Qalalaasaha Soomaaliyeed, raad-gadka loo maareyn la? yahayna kaga tegay. Wareeggii 1aad waxa la qabtay bishii Jeeniweri 1993kii waxaana ka soo qayb galay Butrus Qaali iyo wefdi uu hoggaaminayay, si aan mugdi ku jirinna waxa u muuqatay sida aan qarsoodiga ahayn ee Butrus Qaali u af-duubayay qadiyadda Soomaaliyeed. Shirarkaa waxa isugu iman jiray Ururrada Siyaasadeed ee Soomaaliya, ururka SNM-na waxa uu u tegi jiray goob-jooge ahaan. Labadaa shirba waan ka qayb galay.
In yar haddii aynu dib u noqonno, 1991kii markii Somaliland lagu dhawaaqay Cigaal mar ayuu soo gaadhay Burco oo lagu shirsanaa. Isla sannadkaa, Jabuuti waxa uu kaga qayb-galay laba shir oo ahaa dibuheshiisiin Soomaaliyeed oo go?aammadii ugu mudnaa ee ka soo baxay aynu ka xusi karno:
Cigaal shirarkaa ka dib waxa uu ku noqday dalkaa Imaaraadka Carabta oo uu deggenaa, wax hawl siyaasadeed ahna kuma uu lug lahayn. Waxa kale oo jirtay in Cali-mahdi markii uu Muqdisho ku noqday uu dhisay dawlad uu Cumar Carte Qaalib ka noqday Ra?iisal-wasaare, kaas oo Golihiisii Wasiirrada ku soo daray Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. Xukuumaddaa Cigaal kama uu qayb gelin.
Dhaqan ahaan wefdiyada rasmiga ah ee Ururrada waxa la dejin jiray Hotel Ghion. Halkii ayaanu ku degnay. Wefdigii Guurtida waxa lagu dejiyay Hotel Afrique. Waxa aan xusuustaa Cigaal oo galab noogu yimid Hotel Ghion. Waxa uu xidhnaa surwaal boor ah iyo garan bunni madow xiga ah oo ku giigsan. Waxa uu sitay shandad yar oo ?samsonite? ah oo maas ah oo cas. Shandaddaa Boorame waa uu ku haysan jiray, markii uu Madaxweynaha noqdayna xafiiska ayuu ku haysan jiray.
?Adeer, waxa aan halkan galabta u imid in aan arko qaar ka mid ah madaxda wefdiyada Ururrada Soomaaliya oo aanu afka is-gelinno inta aan shirka si rasmiya loo furin. Waxa aan doonayaa in aan ku qanciyo haddii ay ila qaataan in shirkani hawlihiisa ku koobo Soomaaliya oo aan shirkan lagu soo qaadin arrinta Somaliland. Sidaa darteed ayaan idiin ku imid si aan idiin la socodsiiyo oo aanan ugu dhaqaaqin wax aydaan la socon.?
Aynu ku noqonno Hotel Ghion iyo kulankii gaabnaa ee aanu Cigaal galabtaa la yeelannay. Markii uu Cigaal hadalkii ka baxay naxdin iyo khajilaad ayaa nagu habsatay. Da?dayadii iyo da?dii Cigaal ayaanu isu eegay. Waayo-aragnimadiisii iyo taayadii ayaanu isu eegay. Waxa aanu la yaabnay su?aashan uu na weydiiyay. Haddana is-la markiiba waa aanu garawsannay in ay daw ahayd. Markiiba aniga ayaa hadalkii qaatay:
?Adeer hawshan aad u socoto waxa aanu u aragnaa mid inoo wada dan ah. Waa hawl aad ku dhaqaaqi karto waxna ka ma qabno. Waxa kale oo aanu kuu sheegaynaa in aanad u baahnayn mar walba in aad noo timaaddo ee marba wixii aad dan mooddo ku dhaqaaq, adiga oo aan nasoo wargelinna ogsoonow in aanu kugula jirno.?
?Adeer, laba kun oo Doollar ayay niman aanu xidid nahay sooryo iigu keeneen, ee aan wax idin ka siiyo.?
?Adeer, annaga ayaa kaa galaangal roon e?, iska hayso waxba waayi meynno e?.?
Halkan ka akhriso qado sharaftii loo sameeyey Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisa Dinner Discussion with His Excellency Ahmed Mahamoud Silanyo, President of Somaliland
Waxaa shalay qado sharaf loogu sameeyey madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud siilaanyo iyo weftigii uu hogaaminayey oo beryahanba ku jiray hawl shaqo qaran, wakhtigan xaadirka ahna ku sugan caasimadda dalka USA (Maraykanka). Haddaba qado sharafka waxaa ka soo qayb galay ganacsato iyo tujaar u dhalatay dalka Maraykanka. Waxaana ay doonayaa in ay dalka Somaliland maal-gashadaan. Haddaba waxaa halkaa lagu soo dhaweeyey oo khudbad ka jeediyey, madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Axmed Maxamed Maxamuud siilaanyo.
Dinner Discussion with His Excellency Ahmed Mahamoud Silanyo, President of Somaliland Email a Colleague
BCIU is pleased to announce a Dinner with
His Excellency Ahmed Mahamoud Silanyo
Republic of Somaliland&
H.E. Hersi Ali H Hassan, Minister of Presidential Affairs
H.E. Mohamed A. Omar, Minister of Foreign Affairs & International Co-operation
H.E. Saad Shire, Minister of Planning & Development
H.E. Hussien A. Duale, Minister of Mining, Energy & Water Resources
H.E. Osman Abdilahi Sahardiid, State Minister of Finance
H.E. Rashid Garuf, US-Somaliland Ambassador
**SPACE IS LIMITED. To register please contact Mac Skelton at 212-490-0460 or m-skelton@bciu.org**
President Silanyo unseated incumbent Dahir Rivale Kahin in Somaliland’s June 26, 2010 election to become the constitutional head of Somaliland. President Silanyo earned a master’s degree in economics from the University of Manchester in 1965. He returned to Somalia to serve the Republic Government’s Minister of Planning, Coordination, and Commerce, and as Chairman of the Republic’s National Economic Board. He went on to senior leadership positions in the Somali National Movement through the period which led to Somaliland’s 1991 declaration of independence from Somalia in May of 1991 to the present. Prior to his election as President, he served in the Somaliland Government as a Member of the House, Minister of Finance, and Minister of Planning and Coordination.
Participation Fee: $0 members or non-members
BCIU Contact: Mac Skelton
Copyright © BCIU, All rights reserved.
Sawirka maanta daawo abuurta Ilaahay swc Cir+Cadceed+ Daruuro+Buuro+Bad+Dad
Waxa aanu maanta akhristayaashada us oo xulnay sawir aad iyo aad u qurux badan oo aad inoogu iftiiminaysa abuurta awood ee uu Ilaahay leeyahay swc (subxaana wata caalaa)
Sida aad sawirka ka aragtaan. Cir+Cadceed+ Daruuro+Buuro+Bad+Dad
Daawo barnaamijka Hereri & Hargeysa waa magaalada Xiis iyo Maydh waa barnaamij xiiso leh daawasho wacan
25 April, 2013 — somaliland1991
Somaliland backs international intervention in troubled Somalia (BBC News)
23 April 2013 Last updated at 11:13 GMT Help
Somaliland broke away from the rest of Somalia in 1991 but while it has been far more stable than its southern neighbour, its independence has not been internationally recognised.
Its President, Ahmed Silanyo, spoke to the BBC’s Mark Doyle about relations with Somalia.
Halkan ka daawo video + sawirro shil baabuur oo ila 8 qof kud hinteen qaar kalena ku dhaawacmeen oo duleedka Arabsiyo ka dhacay
Faahfaahin Dheeraad Ah: Shil Baabuur oo oo Sababay Dhimashada 7 Ruux iyo Dhaawac Badan oo Saaka ka Dhacay Tuulada Carro yaambo ee Degmada Arabsiyo.
Shirkani oo ay ku geeriyoodeen 7ruux oo kala ah 4haween ah iyo 2 caruur, iyo 1nin…… Daawo Sawiradda
Gabiley(GNS) shilbaabuur oo aad u naxdin badanaa ayaa maanta ka dhacay tuulada caro-yaabo ee katirsan degmada arabsiyo ee gobolka gabiley. Abaaro 12:40 saacada geeska africa markii ay ahayd ayaa shilkani ka dhacay.
shilkani oo ay sababeen labo baabuur oo isku dhacay oo uu mid ahaa baabuur xamuul oo sidey raashin mucaawano ah ee dalka Turkigu ku caawiyey Somaliland kuna sii jeedey gobolka gabiley, halka gaadhiga kale uu ahaa gaadhi dhayne ah oo muus kasoo qaadey degmada Tog-wajaale,kuna sii jeedey caasimada hargeysa.
Halkan ka daawo warkii maanta 24 April 2013 tv:ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland
Halkan ka daawo Madaxweynaha Somaliland iyo wefti uu hogaaminayo oo booqday senat-ka USA iyo wasaaradda gaashaandhiga ee Pentagon
Washington,D.C(SLNTV):madaxwaynaha somaliland oo ku gudo jira kulnaka uu la yeelanayo madaxda marayknaka, ayaa maanta waxa uu aqalka baarlamaanka ee capitol hill kula kulmay senator iyo Saraakiil ka tirsan xarunta ciidamada ee Pentagon-ka. Kulankan oo aan saxaafadda loo diiday in ay wax ka soo tebiyaan.
Shirkadda soo saarta saliida iyo batroolka ee DNO International oo Somaliland la gashay heshiis ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay heshiiskaasi
Shirkaddan DNO ee soo saarta saliida iyo bartoolka ee laga leeyahay dalka Norway, ayaa heshiis maanta la gahsay dalka jamhuuriyadda Somaliland. Heshiiska oo ka dhacay caasimadda dalka Maraykanke, ee Washington D.C. Waana heshiis taariikhiya oo ay kala saxeexdeen Somaliland iyo shirkadda DNO. Haddaba markii uu heshiiskaasi ka dhacay Washington ayaa shirkadda DNO, war-murtiyeed ay ka so saartay heshiiskan. waanakan isagoo ku qoran af-ingiriisi
Oslo, 23 April 2013 — DNO International ASA (“DNO International”), the Norwegian oil and gas company, announced today that it has entered into a Production Sharing Contract (PSC) covering Block SL18 onshore Somaliland.
Halkan ka daawo video+sawirro Somaliland oo heshiis la gashay shirkadda soo saarta baatroolka iyo saliida 24 April 2013
Washington,D.C(SLNTV):Xukuumada Somaliland oo heshiis la gashay shirkad shidaalka soo saarta oo laga leeyahay wadanka Norway heeshiiskan oo ka dhacay Magaalada Washington ee wadanka maraykanka , dhinaca xukuuumada waxa u sexeexay wasiirka macdanta, Tamarta iyo biyaha.
Halkan ka daawo sawirrada madaxeynaha Somaliland Axmed M.M Siilaanyo oo khudbad ka jeediyey Atlantic Council